Marrybrown Myanmar | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Classifieds, Personal Ad. » Marrybrown Myanmar
Posted by etone on Jul 8, 2013 in Classifieds, Personal Ad., Critic, Food, Drink & Recipes, Local Guides | 30 comments
သဂျီးနဲ့ တကွ အွန်လိုင်းက စာဖတ်သူများ ၊ ရွာသူ ရွာသားများ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါနော် ။
မနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့လည်းဖြစ် ၊ ရုံးပိတ်ရက် ၊ ကျောင်းပိတ်ရက်လည်း ဖြစ်တာကြောင့် ၊ အိမ်မှာနေရင်း အနားယူဖြစ်ခဲ့ကြပါသလား ဒါမှ မဟုတ် မိသားစုနဲ့ပဲ ဟိုဟိုဒီဒီ သွားရင်း ပျော်စရာအချိန်လေးတွေ ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ကြပါလား ။ ကျွန်မကတော့ ရွာထဲက ရေးဖော်ရေးဖက် ၊ ပြောင်ဖော်ပြောင်ဖက်များဖြစ်တဲ့ ဆူး ၊ အမတ်မင်း ၊ ရွှေတိုက်စိုး ၊ AKKO၊ ရွှေအိ ၊ နွယ်ပင် ၊ သန္တာ၊ရွှေတိုက်အုပ်တို့ နဲ့ အတူ သန့်ရှင်း သပ်ရပ်တဲ့ အပြင်ဆင်နဲ့ အရသာရှိတဲ့ အစားစာတွေကို မြည်းစမ်းကြည့်ရင်း စူပါဆန်းဒေးရဲ့ အရသာကို ထွေရာလေးပါးပြောဆို စနောက်လို့ စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာနဲ့ ကုန်ဆုံးစေခဲ့ပါတယ် ။
အစားကောင်းစားရလျှင် မိတ်ဆွေကောင်းတွေကို သတိရတတ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပါပဲ သန့်ရှင်း လတ်ဆတ်တဲ့ အစားသောက်တွေကို တစ်နေရာထဲမှာ ဈေးနှုန်းမျှတသင့်တင်စွာနဲ့ စားသောက်နိုင်တဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ။ အချက်ချာကျတဲ့ နေရာမှာလည်း တည်ရှိနေတာကြောင့် သွားလာရလည်း အဆင်ပြေတဲ့ နေရာမျိုးလေးပါပဲ ။
ဆိုင်နာမည်ကတော့ “ Marrybrown Myanmar” ပါတဲ့ရှင် ။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၆နိုင်ငံမှာ Marrybrown ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီး ဖွင့်ထားခဲ့ပြီး ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ပထမဆုံး ဖွင့်လှစ်ခြင်းပါ ။ Burger & Snack ဆိုင်အမျိုးစားပေမယ့် တခြားရွေးချယ်စရာ အစားစာ အတော်များတဲ့ menuတွေ လည်းရှိပြီး ၊ soft drink တွေ ၊ coffeeအမျိုးမျိုး ၊ ice-cream တွေအပြင် ၊ မလေးရှားနိုင်ငံက အရသာ နဲ့ တထပ်တည်းအရသာတူတဲ့ marrybrown ကြက်ကြော်ကိုလည်း အလွှာတန်းစားမျိုးစုံ လက်လှမ်းမှီလောက်တဲ့ မျှတတဲ့ဈေးနှုန်းမျိုးနဲ့ ရောင်းချပေးနေပါတယ် ။ ဆိုင်လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၂၂၀) ရွှေဂုံတိုင်လမ်း ၊ ဗဟန်းပါ ။ (တော်ဝင်နှင်းဆီနဲ့ မျက်စောင်းထိုးနားလောက်မှာပါ)
အစားသောက်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ လတ်ဆတ်တဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကို အသုံးပြုထားပြီး ဆီကိုလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်အောင် cholesterol free သုံးပေးထားပါတယ်တဲ့ ။ အလကားနေရင်း ၀ိတ်တက်နေလို့ ဆီကြော်စာတွေ စားချင်ပါလျှက် ရှောင်နေရသူတွေအတွက်တော့ ရွေးချယ်စရာနေရာတစ်ခုပေါ့ ။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ စားဖိုမှတွေကလည်း မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း မြန်ဆန်ပြီး အရသာရှိတဲ့အစားစာတွေ ပြင်ဆင်နိုင်တာကြောင့် ၊ ကျွန်မလို မှာပြီးချက်ချင်းစားချင်တဲ့ ၊ စိတ်မရှည်တဲ့ လူမျိုးတွေအတွက်တော့ ၊ စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးနိုင်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့ ။ ပန်းကန်၊ခွက်ယောက် အသုံးပြုပေးထားမှု အပိုင်းမှာလည်း သေသေသပ်သပ်နဲ့ သန့်ရှင်းမှု ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။
ဒီဆိုင်ရဲ့ထူးခြားမှု နောက်တစ်ခုကတော့ ဆားဗစ်ပေးတဲ့ အပိုင်းပါ ။ စားစရာမှာတဲ့ အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ တခြားဝန်ဆောင်မှု အပိုင်းမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်တာရှိလျှင် တခြားဆိုင်တွေမှာလို ပြင်ပက ၊ဘေးက အသံထက်ဖုံးအောင်အော်ပြောရတာမျိုး ၊ အသံမြင့်ပြောရတာမျိုး ၊နှစ်ခါထပ်ပြီး ပြောရတာမျိုး မရှိတာကြောင့် …. စကားကို တစ်ခါထက် နှစ်ခါ ပြန်မပြောချင်တဲ့ ဂွတီးဂွကျ ကျွန်မအတွက်တော့ဆက်ဆံရ အဆင်ပြေတဲ့ဆိုင်မျိုးပါပဲ ။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ … မဟုတ်သေးဘူးပဲ ။ ဆိုင်တစ်ချို့မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းရဲ့ စိတ်အခြေနေအရ ၊ ဆားဗစ်ပေးတဲ့ ပန်းကန်ခွက်ယောက်ကိုင်တွယ်မှုကြောင့် စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတာမျိုး မရှိခဲ့ဘူး ။ ဆိုင်က၀န်ထမ်းတွေကို လျင်ပါးစွာ လေ့ကျင့်ပေးထားပုံရပါတယ် ။ ပန်းကန်တွေ လာချတာရော ၊ ပြန်သိမ်းတာပါ ညှင်သာလွန်းတာကြောင့် စိတ်အနှောက်ယှက်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။ ဒီလိုပါပဲ တချို့သော ဆိုင်တွေမှာ စားသုံးသူအချင်းချင်း စကားပြောနေတုန်း ပြောလက်စ စကားမရပ်သေးဘူး ၊ ဆိုင်ဝန်ထမ်းက ကြားဖြတ်စကားပြောတာမျိုး ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှု အပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အင်ကွာရီ လုပ်တာမျိုးမရှိပဲ … မေးချင်တာရှိလျှင်တောင် စားသုံးသူတွေ စကားရပ်တဲ့အထိ စောင့်ပြီးမေးတဲ့ အလေ့ကျင့်မျိုးကလည်း ၊ တခြားနိုင်ငံတွေက Marrybrown ဆိုင်တွေတော့မသိဘူး ၊ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ အတော့်ကို အလိုက်သိတဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့ အလေ့ကျင့် အပြုမူလို့ ပြောလို့ ရပါတယ် ။ ဆိုင်ဝန်ထမ်း အများကြီးရှိပြီး သူ့အပိုင်းနဲ့သူ ခွဲတာဝန်ယူထားတာကြောင့် တခြားဆိုင်တွေကလို လူများပြီး ပွဲမစည်တဲ့ အနေထားမျိုးမဟုတ်တာကလည်း ၊ သဘောကျစရာအချက်တစ်ခုပါပဲ ။
ဆိုင်ရဲ့ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းပုံအရ အဖြူရောင်ကို အဓိက သုံးထားသလို ၊ သဘာဝ အလင်းရောင်ကျရောက်မှုကို အခြေခံထားကာ ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ မှန်ချပ်တွေနဲ့ ကာရံထားတာကြောင့် တစုံတစ်ယောက်နဲ့များ ချိန်းထားမိလို့ မျှော်တော်ယောင်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန် ၊ မျောက်မီးခဲ ခုထိုင်မိသလို ၊ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ခေါင်3း60ဒီဂရီ လှည့်ပတ်ရှာနေစရာမလိုပဲ ၊ ထင်ထင်းရှားရှားတွေ့နိုင်တဲ့ အနေထားမျိုးပါပဲ ။ :oops:အသုံးပြုထားတဲ့ စားပွဲနဲ့ ထိုင်ခုံတွေကအစ မနိမ့် မမြင့်လွန်းပဲ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ် ။ အချို့သောဆိုင်တွေမှာ နေရာကျယ်လျှင်ပြီးရောဆိုတာမျိုး ခုံတွေထည့်သုံးထားပြီး ၊ ထိုင်နေရင်း 30 ဒီဂရီလောက်စော င်းတာနဲ့ မှောက်လဲနိုင်တဲ့ ခုံမျိုး ဒီဆိုင်မှာ မသုံးထားတာကြောင့်လည်း ၊ အရမ်းအဆော့သန်တဲ့ ကလေးတွေအတွက်ရော ၊သူ့မိဘတွေအတွက်ပါ စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့် စားသောက်နိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုပေါ့ ။ ပြောင်းလဲ လာတဲ့ခေတ်စနစ်ကြောင့် အစားသောက်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တချို့မှာ အစားစာ ၊ ၀န်ဆောင်မှု ၊ ဈေးနှုန်းအပြင် ၊ decoration အပိုင်းကိုပါ ဦးစားပေးလာတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ် ။ တချို့ဆိုင်တွေမှာ ထိုင်ခုံအစား မိသားစုလိုက် စီးဖို့ ဒန်းလေးတွေ ထားပေးတတ်တယ် … ။ ကလေးပေါက်စနတွေအတွက်တင်မဟုတ်ပဲ ၊ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေကနေ ၊ မကြီးမငယ်အရွယ်ကြီးတွေအထိ ဒန်းပေါ်ထိုင်လို့ ရတဲ့ စားပွဲမျိုးကို လုယှက်နေရာ ဦးတာတွေ မြင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။:wink: ဒီဆိုင်မှာကတော့ ၊ ဆိုင်ရဲ့ ဘယ်ဘက် တခြမ်းလုံးက ဒန်းတွေနဲ့ စားပွဲတွေချည်း တန်းစီ ချပေးထားတာကြောင့် နေရာဦးစရာမလိုပဲ အဲ့လိုနေရာမျိုးထိုင်လိုက အေးအေးဆေးဆေး သွားထိုင်စားနိုင်ပါတယ် ။ ကော်ဖီတခွက်တည်းသောက်ပြီး တနေ့လုံး ၀ိုင်ဖိုင်ထိုင်သုံးချင်တဲ့ ချစ်တီးလူစားတွေအတွက်လည်း တွက်ခြေကိုက်တဲ့ နေရာမျိုးပါပဲ … ။
ကျွန်မအရင်က toilet တွေအကြောင်း ပို့စ်တပုဒ်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ် ။ တော်တော်တော့ကြာခဲ့ပါပြီ အပိုင်းခွဲရေးခဲ့တာ (၁)ပဲ တင်ပြီး (၂) နှင့် (၃)ကို တင်ချင်စိတ်မရှိတာကြောင့် ရေးရုံ ၊ မတင်ဖြစ်ပဲ ဒီတိုင်းထားခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဆိုင်တွေရောက်တိုင်း ၊ မဖြစ်မနေ အဲ့ အထဲရောက်တဲ့အ လေ့ကျင့်ရှိခဲ့တာကြောင့်ပါ ။ အထူးတလည် မှတ်သားလေ့လာတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ရောက်သွားရုံနဲ့ မှတ်မိနေတတ်တဲ့ မှတ်ဥာဏ်ကိုက toilet လေ့လာရေးပါရမီပါလာတာမျိုးလို့တောင် နာမည်တပ်ရမလိုပါပဲ ။ ဒီဆိုင်ကိုရောက်ြပီး ပြန်ခါနီး ထုံးစံအတိုင်း toiletထဲရောက်ခဲ့ပြန်တယ် ။ အတွင်းပိုင်းမှာ ladies & Gents ခွဲထားပေးပြီး ၊ ဒီထဲမှာလည်း အဖြူရောင်ကို ခြေခံထားသုံးလို့လို့ ဆိုင်နဲ့ ကပ်လျှက်တွဲနေပေမယ့် ၊ အနံ့ သက်ရော ကြမ်းပြင်သန့်ရှင်းမှု အပိုင်းကိုပါ ဂရုစိုက်ပြီး သန့်ရှင်းထားတာမျိုးတွေ့ရပါတယ် …. ။ သုံးပေးထားတဲ့ ဆပ်ပြာအဆီကပဲ ၊ အနံ့ ပြင်းပြင်း ၊ ရေအဆပေါင်းများစွာ ရောထားတဲ့ တချို့သော ဆိုင်တွေလို ပြီးစလွယ် ပေါပေါလောလောအမျိုးစားမဟုတ်တာကလည်း ၊ စားသုံးသူတွေအပေါ် စေတနာထားခြင်းမျိုးလို့မြင်ပါပဲ ။ဒီလို ၀န်ဆောင်မှု ကောင်းကောင်းနဲ့ ဆားဗစ်ပေးနေတဲ့ ဆိုင်မျိုးမို့ ….တခြားဆိုင်တွေနဲ့ ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်များရှိမလား ၊ ဈေးများကြီးမလားလို့ တွေးနေကြသူတွေလည်း ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ် … ။ ပြောမယုံ ၊ ကြုံဖူးမှ သိဆိုသလိုပဲ … အပြင်ဆင် ၀န်ဆောင်မှုအားကောင်းပေမယ့် …ဈေးနှုန်းအားဖြင့်တော့ တကယ့်ကို သင့်တင့်မျှတတဲ့ ဈေးနှုန်းမျိုးပါပဲ ။ မိသားစုနဲ့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ သူငယ်ချင်း ၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းသင်းတွေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် စကားလက်ဆုံကျလို့ကောင်းတဲ့ နေရာလေးဖြစ်တာကြောင့်ရော ၊ အစားသောက် ၊ ၀န်ဆောင်မှု ၊ သန့် ရှင်းမှု အပိုင်းမှာ ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့်ပါ …… ကျွန်မကတော့ နောက်ထပ်သွားဖြစ်ပါဦးမယ် ။
ကျွန်မ အရင်က ၊ အစားသောက်ပိုင်း ဆားဗစ်ပိုင်းမှာ ပြသနာ ရှိခဲ့တဲ့ ဆိုင် တချို့နဲ့ လူသုံးကုန် ဘရန်း တချို့အကြောင်း ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်ပျက်တခုအဖြစ် ကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်အတိုင်း အားမနာတမ်း ချရေးခဲ့ဖူးပါတယ် ။ထောက်ပြ ဝေဖန်တာတွေ ရှိခဲ့ဖူးသလို အခုလို လူအများတတ်နိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုမျိုး ပေးနိုင်တဲ့ ဆိုင်မျိုးကိုလည်း ကြော်ငြာပေးချင်စိတ်ဖြစ်မိတာကြောင့် ဒီပို့စ်ကို ရေးပါတယ် …. အခုလို မိုးရာသီမှာ ၀မ်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုံးပိုများတတ်တာကြောင့် သန့်ရှင်းတဲ့ အစားသောက်စနစ်မျိုး ရွေးချယ်စားသောက်ပြီး မိမိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ကိုယ်တိုင် အလေးထားချင်သူများအတွက်ရော ၊ သင့်တင့်မျှတတဲ့ ဈေးနှုန်နှင့် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့အစားသောက်တွေကိုမှ ရွေးချယ်စားချင်ပါတယ်ဆိုသူများအတွက် ကိုယ်တိုင်သွားပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုရဖို့ ….ရွှေဂုံတိုင်က Marrybrown Myanmar ဆိုင်အကြောင်း သတင်းပေးလို့ သံချောင်းခေါက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် …… ။
။ ဆိုင်လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၂၂၀) ရွှေဂုံတိုင်လမ်း ၊ ဗဟန်းပါ ။
ကားလမ်းတော့ ကြပ်တယ်.. သို့သော် ပါကင် ရှိတော့.. အတွင်းထဲမှာ စိတ်ချ လက်ချ ရပ်ပြီး စိတ်ကြိုက် ကြာကြာ ၀ါးတီး ပေးလို့ ရပါကြောင်း
ဘယ်သူဖွင့်တာလဲ ဟင်င်င် …..
ဟို ပြည်လမ်းက ဆိုင်လို … ( ထိုင်နေကျ ) စားလို့ သောက်လို့ ကောင်းတာနဲ့ ထိုင်
စားရင်းသောက်ရင်း … ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း ပြောရင်
အဖေ မကောင်းကြောင်း ပြောလိုက်
သားမကောင်းကြောင်း ပြောလိုက်နဲ့ …. ပြီးမှ ကိုယ်ထိုင်နေတာက …. ငိငိ …
တလက်ဆတည်းဗျာ … ပုံတင်လို့ မရလို့ စောင့်နေတာ
မမဂျီးတုံလိုဘဲ အစားအသောက် အကြောင်းတင်မလို့ ခပ်မဆင် မူကွဲ ….
ကယွဲစည်တင်မယ့်ပုံတွေ သများ ကျိစ်ပြီးသားနော် …. မမပြာ ဟိုနေ့က .. လမ်းမှာကျိစ်နေဒါတွေ မဟုတ်လား ..
ဂဇက် ကွန်ဖရန့်လုပ်ရင် အဲမှာလုပ်ကြပါလားကွယ်..
အပြင်အဆင် ၀န်ဆောင်မှု အားလုံးကိုစားတဲ့အဆင့်
fastfood chain industry တော့စပြီ .. ကွိကွိ ..ပိတ်ကားပေါ်မှာ ဆက်ကြည့်ပါ့မယ်ဗျာ…
” ဆီကိုလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်အောင် cholesterol free သုံးပေးထားပါတယ်တဲ့ ”
” အလကားနေရင်း ၀ိတ်တက်နေလို့ ဆီကြော်စာတွေ စားချင်ပါလျှက် ၊
ရှောင်နေရသူတွေအတွက်တော့ ရွေးချယ်စရာနေရာတစ်ခုပေါ့ ”
နိုင်ငံတကာ ရဲ့ “မျက်လှည့် ဆန်တဲ့” စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေကို ၊
ရွာသူားတွေရဲ့ ဗဟုသုတ အတွက် နဲနဲ ပြောပြလိုပါတယ် ။
စေတနာ နှင့်ပါ ။ စာရေးသူ E tone ကို ဝေဖန်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။
စာရေးသူ E tone ကို ဝေဖန် သလိုဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ် ။
၁ ။ Cholesterol Free Cooking Oil ။
Cholesterol free လို့ပြောတယ်ဆိုရင် တော့ ၊
အဲဒီဆီဟာ စားအုန်းဆီ ဖြစ်ဖို့များတယ် ။ ဟီ ဟိ ။
တိရိစ္ဆာန် က ရတဲ့ ဆီတွေမှာပဲ Cholesterol တိုက်ရိုက် ပါပါတယ် ။ ( eg : ဝက်ဆီ )
အပင် က ထုတ်တဲ့ ဆီတွေမှာ Cholesterol တိုက်ရိုက် မပါပါဘူး ။ ( eg : အုန်းဆီ ၊ စားအုန်းဆီ )
သူတို့ကို စားလိုက်ရင် ၊ သူတို့ထဲမှာပါတဲ့ Saturated Fat ကြောင့်သာ ၊
လူ့ ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှာ ၊ မကောင်းတဲ့ Cholesterol တွေ ထွက်လာတာ ။
” Like all vegetable oils, palm oil does not contain cholesterol,
although saturated fat intake increases both LDL and HDL cholesterol.
( Ref ; Wiki )
၂ ။ No Suger Added ။
သကြား ထပ်ပြီးတော့ ( ထပ်ပြီးတော့ ) မထည့်ထားတာကိုပြောတာ ။
ဥပမာ ။ ။ ကြံရည် ၊ ဖရဲသီး ဖျော်ရည် ဘူးတွေမှာ ရေးထားရင် ။
အဲဒီ ကြံရည် ၊ ဖရဲသီး ဖျော်ရည် ထဲကို သကြား ထပ် မထည့်ထားဘူး လို့ ပြောတာ ။
အဲဒီ ကြံ or ဖရဲသီး ထဲမှာ နဂိုထဲကပါတဲ့ သကြား ကတော့ ရှိပြီးသားပဲ ။
ဆီးချိုသမားတွေ အဲဒီ ကြံရည် ၊ ဖရဲသီး ဖျော်ရည် သောက်မိရင်တော့ ၊ ဟီ ဟိ ။
အဘ အဖေ ၊ နိုင်ငံခြားမှာ ၂ နှစ်လောက် ကျောင်းနေခဲ့တဲ့သူတောင် ၊
ဆီးချို ရှိလို့ ဆိုပြီး အဲဒီ ” No Suger Added ” တွေကိုပဲ ၊
ယုံယုံ ကြည်ကြည် နှင့် ရွေးသောက်နေလို့ ၊ ရှင်းပြရသေးတယ် ။
တကယ့် အသုံးဝင်တဲ့ Information အစစ်အမှန်တွေက ၊ ( eg : Suger % or amount )
ဖတ်ရမလွယ်တဲ့ Small Printing စာသေးသေးလေးတွေ ထဲမှာမှ ရှိတာရယ် ။
ရွာသူားတွေရေ ။ အခု ဒီမို ခေတ်သစ်ကြီးမှာ ။
အရင်လို ၊ စစ်အစိုးရ / တရုတ်ကြီး လုပ်သလို ပေါ်တင် ရိုက်တဲ့ လူမိုက် စံနစ် မဟုတ်တော့ဘူး ။
အခု ၊ အန်ကယ် ဆမ် စံနစ် က ၊ မသိမသာ ရိုက်တဲ့ စံနစ် ဖြစ်သွားပြီ ။ ပုံစံ ပြောင်းသွားပြီ ။
ဒါပေမယ့် ၊ မမေ့ကြပါနှင့် ၊ ရိုက်တာကတော့ ရိုက်အုန်းမှာပဲ ၊ ရိုက်တုန်းပါပဲ ။
ကိုကိုဝီ ဆူတော့မှာပဲ …
This is due to the persistence of the founders to present and serve everyone with the savoring local delights. Using Marrybrown’s advantage, Halal , to dominate halal based countries, and preventing weak direct competition with some large fast food chain. In the 1980s Marrybrown became the first local fast food chain to franchise its business system in Malaysia. This was followed by many others who started to making it big in Malaysia franchise business.
အဲသည့်ဆိုင်ကို ဆော့စ်သွင်းတာ ကျောက်စ်ရဲ့ ကျောင်းနေဘက် ဘော်ဘော်ခင်ဗျ…
ဘယ်သူလဲတော့မပြောတော့ဘူး… အား ဟိ
Cholesterol က ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းကျိုးမပေးလို့ Cholesterol ကျအောင်တောင် လုပ်နေကြရတာပဲကို။
Saturated fat ကြောင့် cholesterol ထွက်ကျလာတယ်ဆိုရင် စားအုံးဆီစားတာ အန္တရာယ်များတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါ့မလား မသိတော့ဘူး။
အီတုံးရေးထားတာတွေ ဖတ်ပြီး ပုံတွေကြည့်ပြီး စားချင်စိတ်နဲ့ ဆင်ခြေ ဆင်လက် ဆင့်နားရွက်ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။
” Cholesterol က ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းကျိုးမပေးလို့ ”
နဲနဲ ပြင်ပေး ပါရစေ Ma Ma ရေ ။
Cholesterol အားလုံးက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းကျိုးမပေးတာ ၊ မ ဟုတ်ပါ ။
Cholesterol မှာ အဓိက ၂ မျိုး ရှိပါတယ် ။
High-density lipo protein (HDL) နှင့် Low-density lipo protein (LDL) ပါ ။
LDL က ၊ အစေးပုံစံ မို့ ၊ သွေးကြောထဲမှာ စီးရင်း ၊
သွေးကြောတွေရဲ့ နံရံ မှာချေးကပ်သလို ဖြစ်စေပြီး ၊
သွေးကြောကျဉ်း / ပိတ် / လေဖြတ်စေပါတယ် ။
လူ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းကျိုး မပေးပါဘူး ။
HDL က ၊ အခဲ ပုံစံ ရှိတော့ ၊ သွေးကြောထဲမှာ စီးရင်း ၊
ပိတ် / ကျဉ်း နေတဲ့ သွေးကြောတွေကိုတောင် တိုက်စား ချဲ့ပေးတဲ့အတွက် ၊
HDL က ၊ လူ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းကျိုး ပေးပါတယ် ။
အဟီးးး ၊ ကျနော့်က ကျန်းမာရေးနှင့် ပါတ်သက်ရင် ၊ ဘာမှ သိပ်မသိသူ မို့ ။
ဆရာဝန် ရွာသူားတွေ ကြားထဲ ဝင်ရွှီး ရတာ ၊ ရှက်ကြောက်မိပါတယ် ။
( နို့ ၊ သူတို့ကလဲ ဝင်မှ မပြောကြပဲကိုး )
မှားရင် ပြင်ပေးကြပါအုန်း ။
ပြီးခဲ့တဲ့တပါတ်ကတင်.. စစ်ထားတာ… မကောင်းတဲ့ကိုလက်စရောတက်နေလို့တဲ့..
အဘဖောရေ မင်္ဂလာပါ ။
လိုအပ်ချက်တွေကို ဝေဖန်ထောက်ပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …. တကယ်ပဲ ဗဟုသုတအဖြစ် လည်း မှတ်သား ရပါတယ် ။
ကိုယ်ရောက်သွားစားခဲ့တဲ့ နေရာလေး ၊ စားစရာလည်း စုံ၊ ပတ်ဝန်ကျင်လည်း သန့် ၊ သက်သက်သာသာနှုန်းထားနဲ့ဆိုတော့ … ညွှန်းရုံပါ … ။ကိုယ်တိုင်ကလည်း လိုအပ်ချက်တွေ ၊ မကောင်းတာတွေပဲ ရေးခဲ့တာများတော့ .. ဒီတခါ အဆင်ပြေတဲ့ ဆိုင်လေးတွေ့ လို့ information ပေးတာ …. အမှန်တိုင်းပြောရလျှင် စာရေးဖို့ အင်တာဗျူးခဲ့တာမျိုးမဟုတ်တော့ … ဂဃနဏမသိပါဘူး ။
CAFE JASPER , COFFEE CIRCLE တို့ထက် မနိမ့်တဲ့ အပြင်ဆင်၊ အရသာနဲ့ … ထက်ဝက်ခန့်ကွာခြားတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကြောင့် …. recommendation ပေးတာပါချင့် … :harr:
(ဟိုဆိုင်တွေက လာရိုက်ရင် ပြေးပေါက်ပဲ .. ခွိခွိ )
စားနေစဉ် ဘာမှ တွေးလေ့မရှိ။
ဖရန့်(ချ) ဖရိုင်း စားချင်တယ်။
လာရင် လိုက် ကျွေးပါ တုန်ကလေးးးးး
အန်းနီးတိုင်းမ်း ၀ဲလ်ကမ်းပါ … မမဆွိ ။
ခြင်္သေ့ကျွန်းကသာ အလည်ပြန်လာပါ … စားချင်တာ အကုန်လိုက်ကျွေးပါ့မယ် ။
သွားစားပါအုန်းမည် …မမွေးခင်လေး …
ယောက္ခမရီး ..တားလေးကို လိုက်ကျွေးရင် တာမီးပါ လိုက်ချားလို့ ရ၀ူးလားဟင် .. ခိခိ ..
ချားချင်တာ ၀ုတ်ပါဝူး .. တားယေးနဲ့ တိကျွမ်းချင်ထှာ .. ဟိဟိ
ကြက်ကြော် က မွမွ လေး နဲ့ ပူပူ ကြွတ်ကြွတ်လေး.. စားလို့ ကောင်တယ်..
အိမ်အပြန် ပါဆယ် ဘာဂါ ၀ယ်သွားတော့ အိမ်သားတွေက ပေါက်မုန့် က အိအိလေးနဲ့ အသားကလည်း အရသာ လတ်ဆတ် တဲ့ အရသာမျိုးပဲ ဆိုပြီး မှတ်ချက်ပေးကြတယ်..
ညနေပိုင်း ဆိုင်ပိတ်ချိန် တရက်လောက် ထမင်းလွတ် သွားဝါး ကြမယ်လို့ အိမ်သားတွေ နဲ့ တိုင်ပင်ထားတယ်။
နောက်များ တွေ့ဆုံပွဲတွေ ဘာတွေ လုပ်မယ် ဆိုလည်း အဲ့ဒိ ဆိုင်နေရာ အနေအထားနဲ့ မဆိုးလှဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်။ ဆိုင်ရှေ့ အမိုးအောက်မှာ နေရာ တော်တော် ကျယ်ကျယ် တွေ့တယ်.. ခုံတွေ ခင်းပြီး လူများများ ၀ိုင်းထိုင်ပြီး စကားကြာကြာ ထိုင်ပြောရင်လည်း ရနိုင်ကြောင်း.. ဟိဟိ.. နေရာပါ ကြည့်ခဲ့တယ်..
အရင်ကတည်း ကြက်ကြော်ဆို အရမ်းကြိုက်
ရေခဲမုန့်လည်းကြိုက် ဆလပ်လေးလည်းကြိုက် ခိခိ
မနေ့ကတောင် အလုပ်ကတစ်ယောက် မွေးနေ့ချိလို့ ဘာကျွေးရမလဲပြောတော့
ကိုယ်စားချင်တဲ့ Marrybrown ကကြက်ကြော်လေးအဆိုတင်သွင်းလိုက်တော့
တဲ မကျိုက်တာဘာချိလဲ ဟင်……..
တခါဒဲ တဲမကျိုက်တာဒွေဂို တဲမက်စိရှေ့ ကပျောက်တွားအောင် လုပ်ပလိုက်မို့ဘာ…..
နာ့တို့နဲ့နီးဒယ် ဆန်းဒေးကျယင်တွားချားမယ် ရှလွတ်……….
Etone ကြေငြာကောင်းချက်ကတော့ ကောင်းထက်ဇော်ကျန်ခဲ့ပြီး အရေးကောင်းလွန်းလို့ အရမ်းစားချင်သွားပြီး.. ဂျန့်ဖုဒ် ပြောပြောဘာပြောပြော..စားချင်တာပဲသိတယ်.. စားချင်ပေမယ့်သွားရမှာဝေးလိုက်တာ စနေနေ့က ဂျန်းရှင်းစကွဲက Lotteries မှာ အမဲဘာဂါနှစ်ဆက်ရယ်.. ရေခဲသုတ်ရယ်.. ကြက်ကြော်တစ်ခြမ်းဆွဲပြီး နောက်နေ့ ပေါင်ချိန်တော့ အားလားလား တုံးပေါင်တောင်တက်လာတယ်..
ဒဆို ဦးကြောင်ကြီး ချပေးမယ် ဝိတ်… ခရစ်စတယ်လေးဂို…. တအား…..
ရောက်ရင် သွား ချားမယ်
ရုံးသွားပြန် နေ့တိုင်း အဲ့ဒီဆိုင်ရှေ့ကဖြတ်သွားနေရတော့
ဆိုင်ဖွင့်ဘို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်းလှလာတဲ့ ဆိုင်ကိုကြည့်ပြီး
အိတုန်လေး ကြော်ငြာကလဲကောင်းတော့ ဆန်းဒေး သွားပါဦးမည်…
ဂျီးဒေါ် .. ဂျီးဒေါ် …
ကျုပ်က မာရီဘရောင်းဆိုရို့ ..
စိတ်ဝင်စားနွန်းနို့ လာကျိလိုက်ဒါ …
မင်းဒါး မင်းဒမီးဒွေလည်း ပါဝူးးးးး
အိုက်ဒါဒွေ ဘယ်ပျောက်တွားဒုံးဂျ …
သများမွေးနေ့ကျ အိုက်ဆိုင်မှာ မုန့်လိုက်ကျွေးမယ် စိတ်ကူးတယ်